Diyo post :: ‘एमाले नामको ‘स्लो पोईजन’ दिएर कुठाराघात गरियो’
‘एमाले नामको ‘स्लो पोईजन’ दिएर कुठाराघात गरियो’ - Diyo post
‘एमाले नामको ‘स्लो पोईजन’ दिएर कुठाराघात गरियो’
योगेन्द्र घिसिङ माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् । तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा रहँदा उनको भूमिका निकै उल्लेखनीय रहेको थियो । माओवादी युद्धकालमा घाईत समेत भएका उनी सक्रिय युवा नेता हुन् । प्रस्तुत छ उनै घिसीङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश
एमाले र माओवादी केन्द्रको सम्बन्ध किन विग्रियो ?
एमालेसँग ९ बुँदे लिखित सहमति र ३ बुँधे जो भद्र सहमति भएको थियो । त्यसलाई कायान्वयन गर्नु पर्ने थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत समर्थन गराएर भूकम्प पछिको पुर्नर्निमाण, मधेस र जाजाती आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक होला हुने अपेक्षा थियो । त्यो सम्बोधन गर्न एमाले तयार भएन । वर्तमान सरकारले सम्झौताहरु पालना नगरेकाले अहिले राजनीतिक मोड परिवर्तन भएको हो । लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया अन्तर्गत संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ ।
सम्झौताहरु हुने र उलंघन भइरहने हो भने राजनीतिक विश्वासको वातावरण कसरी अगाडी हुन्छ र ?
परिस्थिति र देशको आवश्यकता अनुसार सम्बन्धहरु बन्छन् । त्यसले निरन्तरता पनि पाउँछ । विगतमा पनि एमालेले विश्वास घात गरेकै थियो । देश र जनताका मुद्दाहरुमा एमाले चुक्दै आएको छ । उसले जनताका मुद्दाहरुलाई हृदयंगम गरेको देखिँदैन । एमालेले विश्वासनियता र ईमानदारीताका सन्दर्भमा ठूलो मुल्य चुकाएको छ । उहाँहरु आफैले यो परिस्थिति सृजना गरेको हो । जुन राजनीतिको लागि दूर्भाग्यपूर्ण हो ।
एमालेसँग सहकार्य तोडिनुमा माओवादी केन्द्रको भूमिका पनि छैन र ?
माओवादी केन्द्र जनयुद्ध र विद्रोहबाट आएको शक्ति हो । हामी विश्वासघात गर्न जान्दैनौं । हामीले एमालेका तीन वटा नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री बनायौं । तर, उहाँहरुले आफू चढेको भ¥याङ विर्सिनुभयो । हामी अहिले नेपालको आर्थिक विकास हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा लिएर आएका छौं । यो मुद्दामा जुन दल ईमान्दार भएर आउँछ उनीहरुसँग हातेमालो नौलो होईन । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेससँग हाम्रो हातेमालो भएको छ । हामीलाई आशा छ, अब मुलुकमा भूकम्पले विक्षिप्त बनेको पुनर्निर्माण अघि बढ्नेछ, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पुरा हुनेछ, देशले स्थायीत्व पाउनेछ । नेकपा एमालेले पनि आफ्नो गल्ति कमजोरीलाई सच्याएर आउनुपर्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा आउनुपर्छ । त्यो विवेक एमाले भित्र पैदा हुनु जरुरी छ ।
एमाले पनि तपाईंहरुको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा आउने संभावना छ र ?
एमाले भित्र पनि देश भक्तहरुको एउटा समुह छ । नेपालको राजनीतिमा ईमानदारीता, स्वच्छता र सहमतिको पक्षधर शक्तिहरु एउटा समुह एमाले भित्र जीवित छ । त्यो शक्तिले एमालेभित्र जित्न सक्यो भने, गलत प्रवृतिको हार हुनेछ । उहाँहरु पनि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यमा आउनसक्ने झिनो संभावना छ ।
एमालेको धारणा तपाईंहरुले धोका दियो भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा धोका दिने शक्तिसँग फेरी कसरी सहकार्य होला र ?
कुरा प्रष्ट छ । तीन बुँदे सहमति र ९ बुँदे सहमति बाहिर आइसकेको छ । यी सहमतिहरुलाई उलंघन गर्ने को हो ? यतिसम्म भयो की बजेट प्रस्तुतिमा माओवादीले उठाएका एजेन्डालाई डाइभर्ट गरियो । घुमाई फिराई पार्टी करण गर्ने काम भयो । एमाले नामको ‘स्लो पोईजन’ दिएर कुठाराघात गरियो । एमालेले हामीसँग गरेको गद्दारीले हामीलाई एमालेसँग ठूलो आशंका छ । आफूले गरेको ‘एग्रीमेन्ट’ नै थाहा छैन भन्ने गरेको एमाले कति हुस्सु पार्टी हो ? एमालेले धोका दियो भनेर राष्ट्रलाई निकाश नदिनु अपराध हो । हामीले राष्ट्रको निकासको लागि यो कदम चालेका हौं । जिम्मेवारी पूर्वक मुलुकलाई अगाडी बढाउनका लागि हामीले पहलकदमी उठाएका छौं ।
यस्तो अवस्थामा एमाले कसरी तपाईंहरु नेतृत्वको सरकारमा आउन सक्छ ?
म विगतको तितो पक्षहरुमा धेरै जान चाहान्न । तर, एमाले भित्र पनि ठूलो शक्ति राष्ट्रियता, देशको विकासको पक्षमा छ । ईतिहासकै समिक्षा गर्ने हो भने त, हिजो एमालेको केही नेतृत्व गणतन्त्र, संघीयता र संविधानसभाको एजेन्डाबाट भागेको थियो । उहाँहरुले गणतन्त्रको पक्षमा निर्णय गर्न कतिसमय लगाउनु भयो नेपाली जनतालाई थाहा छ । तर, अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा प्रमुख हो । उपेक्षित जनताले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने सवाल प्रमुख हो । मधेसको कुरा उठ्ने वित्तिकै ‘मेरो आगन पनि सम्म छ’ भन्ने प्रवृति त्यागेर गहिराईमा जान जरुरी छ ।
तपाईंहरुको नेतृत्वमा बन्दै गरेको सरकारलाई भारतीय सहयोग छ, भनिन्छ नी ?
संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु राम्रो हो तर, सहमति नहुने वित्तिकै बहुमत प्राप्त दलहरुले सरकार चलाउनु स्वभाविक रुपमा मान्नुपर्छ । हामीले मित्र राष्ट्रहरुलाई विवादमा मुछ्ने भन्दापनि राम्रा सुझाव सल्लाहालाई ग्रहण गर्नुपर्छ । वर्तमान गठबन्धन कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चाहानाबाट बनेको होईन । नेपाली जनता र राजनीतिक दलहरुको चाहानाबाट बनेको हो ।
सरकार प्रति अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि कानुन व्यवसायीहरुले संविधानलाई दुई धारबाट व्याख्या गरे । कस्तो संविधान बनाउनुभयो ? संविधानमा त युनिभर्सल ट्रथ हुनुपर्ने होईन ?
केही कानुन व्यावसायीहरुले संविधानलाई अपव्याख्या गरियो । यसले नेपालको राजनीतिमा शुभ संकेत गर्दैन । संविधानको सक्रमणकालिन व्यवस्थाबारे स्पष्ट छ । प्रावधानमा पनि त्यो कुराहरु छन् । यहाँ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा त्यही प्रावधान ठीक, जव आफूले प्रधानमन्त्री छोड्नुप¥यो वा आफ्नो सरकार गुम्ने अवस्थामा पुग्यो त्यतिबेला यो संविधान नै बेठीक ?
पानी लाने कुलोको कुरा गर्नु प¥यो । संविधान जस्तो कुरामा हास्यास्पद कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । सर्वसत्तावादको कोशिष भइरहेको पाएका छौं । यसको जति निन्दा गरेपनि पुग्दैन । आफैले बनाएको नियमहरु कुल्चने कुरा आन्दोलन विपरित कुरा हुन् ।
अब कांग्रेस र माओवादीको सम्बन्धमा कस्तो होला ?
नेपाली कांग्रेसको नेपालको राजनीतिमा लामो ईतिहास छ । जुन सम्झौता भएका छन् । त्यो अनुरुप उहाँहरु अगाडि बढ्नुहुनेछ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । नेपाली कांग्रेसँग भएको सात बुँदे समझदारीमा ईमानदारीता छ । नेपाली कांग्रेस भित्र एउटा पुस्ता देश, जनता र मुलुकको अवश्यकता प्रति जिम्मेवार छन् । माओवादी–कांग्रेस सम्बन्धको भविष्य निकै उज्वल छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको के काम गर्नु पर्छ ?
संविधान कार्यान्वयनका कुराहरुलाई अगाडी बढाउनुपर्छ । मुलुकमा भूकम्पको विपत्तिपछि पुर्नर्निमाणको गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । मधेसवादी, जनजातीको आन्दोलनले उठाएका मागहरुलाई वार्ता सहमतिको माध्यबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउन, मजदुर, आदिवासी, जनजाती, मधेसी दलित, मुश्लिम लगायत जनसमुदायको वित्तिय साक्षरता विकास गर्नुपर्छ । उहाँकै नेतृत्व सरकारले सांस्कृतिक जागरण सहित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउनुपर्छ । जसरी जनयुद्धको नेतृत्व अधयक्ष प्रचण्डले गर्नुभएको थियो । अब आर्थिक विकास र नेपालको समृद्धिको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डले नै गर्नुहुनेछ ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरु छनौट गर्नेक्रममा तत्कालीन एमाओवादी समावेशी भएको थिएन । अब बन्ने सरकार कत्तिको समावेशी हुन्छ ?
विगतमा समानुपातिक समावेशी जातियताको हिसाबले न्युन हुन पुग्योकी भन्ने समिक्षा नभएको विषय होईन । तर पनि क्षेत्रीय हिसाबले सन्तुलित थियो । अब विगतको पनि गम्भिर समिक्षा गरेर समानुपातिक, समावेशी, सक्षम परिणाम ल्याउन सक्ने नेतृत्व चयन गर्न पार्टी गम्भिर भएको छ ।
नेपालको आर्थिक विकासको चरण शुरुवात हुनको लागि उत्पीडनमा परेका जाती समुदायलाई अधिकार दिनु अनिवार्य छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण भएकाले उत्पीडित जाती समुदायको वित्तिय साक्षरता विकास गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिवद्ध छ । व्यवहारत अन्य मुख्य दलहरु भन्दामाथि उठेर समावेशी र सवल टिम चयन गर्नेछ हामीलाई विश्वास छ ।
‘लोडसेडिङ देखाएर करोडौं कमाउने कर्मचारी को–को थिए ? Exlusive खुलासा… Thursday, 12 January 2017
केपी ओली र अर्थमन्त्रीले हामीसँग झूट बोल्नुभयो : वर्षमान पुन अनन्त
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको बहसले नेपाली राजनीति फेरी तरंगित छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ...
राजतन्त्र पुनरागमनको विषयमा सर्वसाधरणलाई सोध्नुपर्छ : ज्ञानेन्द्र शाहा
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहा त्यति साह्रै सञ्चार माध्यममा आउँदैनन् । तर, उनको ७० औं जन्मदिनको उपलक्षमा एक चर्चित आरजे सविना कार्कीले ...
‘दुई/तीन मिनेटमा राजा विरेन्द्रको परिवार सिद्धिसकेको थियो’
सत्य छानबिन भए ज्ञानेन्द्र चोखिने मौका पाउँथे । दीपेन्द्रको कोठामा ५ /७ वटा राईफलहरु हुन्थ्यो । उहाँको मोटरमा पनि हतियार ...
‘हामीसँग मात्रै होइन वर्षमान, जर्नादन र बलदेव जीहरुसँग समेत हतियार छ ’
विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य मोहन कार्की ‘जिवन्त’ सशस्त्र द्वन्दकालमा चर्चित नाम हो । वि.स. २०१६ सालमा धादिङको निलकण्ठ ...
‘प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकार ढल्ने थिएन’
एमाले नेता तथा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित कुनै समय निकै चर्चा थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्री रहँदा डिभि ...
देउवाले दिल्लीसँग के–के मागेका थिए ? पढ्नुहोस् भारतीय टिभीलाई देउवाले दिएको अन्तर्वार्ता (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २९ वैशाख । तराईसँग काठमाडौंलाई जोड्ने फास्टट्र्याक निर्माण कार्यको विरोधमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्ताबारे ...
राजेन्द्र महतो अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धन पुनः आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । नयाँ संविधानले विगतका आन्दोलनबाट ...